Cuntada Dukan - midda shaqeysa, soo bandhig sirta! | Cuntada Nutri
Waa dhif iyo naadir in qofkaas aan waligii isku dayin nooc ka mid ah cuntada ama uu ku jiray cunnooyin noloshiisa oo dhan. Maanta waxaa jira boqolaal cunno oo nooc kasta leh oo ballan qaadaya inay lumin doonaan taxano kiilo ah waqtiga rikoorka. Dhowr sano waxay ahayd mid aad moodada cuntada Dukan, qorshe miisaan lumis ah oo ku guuleystay sumcadda adduunka iyo tan waxay soo jeedineysaa inaad lumiso miisaanka hab gebi ahaanba dabiici ah.
Cuntada Dukan waxay ka kooban tahay 4 weji taasi waxay ka caawin doontaa qofka miisaanka inuu aad u yaraado dhakhso iyo dheellitiran. Haddii aad rabto inaad wax yar ka ogaato nooca noocan ah, ha lumin faahfaahin oo tixgelin fiican ha ku yeelo astaamaheeda iyo khataraha taasi waxay u horseedi kartaa caafimaad.
1 Waa maxay cuntada Dukan?
2 Wejiyada cuntada Dukan
3 Khataraha cuntada Dukan
Waa maxay cuntada Dukan?
La fadlan cun waa cunto borotiin ah oo raadineysa isticmaalka borotiino cuntada maalinlaha ah iyo ka fogaanshaha marwalba qaadashada karbohaydraytyada. Tan, jidhku wuxuu awoodaa inuu cuno baruurta ku urursan gudaha sidaasna miisaanka ayuu ku dhimayaa a dhakhso badan oo fudud. Intii lagu jiray labada weji ee hore ee cuntadan, kiilo dhigay halka inta lagu gudajiray labadii culeys ee la helay la ilaaliyo, laga hortago waxa loogu yeero saameyn rebound
Wejiyada cuntada Dukan
Wejiga weerarka: Tani wejiga koowaad Waxaa lagu gartaa isbeddel ku dhaca dheef-shiid kiimikaadka laftiisa iyo kan luminta kiilo ayaa aad uga weyn. Muddada wejigan waxay kuxirantahay qadarka kiilo ee qofku doonayo inuu lumiyo. Waxay socon kartaa hal maalin ilaa qiyaastii hal toddobaad. Marxaladdan, kaliya isticmaalka cuntooyinka hodanka ku ah noocyada xayawaanada sida digaagga maqaarka, ukunta, kalluunka ama hilibka cas. Cuntooyinkan waa la qaadan karaa iyada oo aan xaddidnayn oo qofku uu xor u yahay inuu doorto inta la isticmaalay. Dhinaca kale, cuntooyinka muhiimka ah sida miraha gebi ahaanba waa mamnuuc, khudaarta, bariis ama badar.
Wejiga markab: Marxaladdan, cuntooyinka cusub Cunnadan markaa way ka dheellitiran tahay wayna kala duwan tahay. Borotiinnada, khudaarta waa la qaadan karaa iyada oo aan xad lahayn. Marxaladani waxay badanaa socotaa laba bilood taas oo caadiyan ah waqtiga dhaafa ilaa uu qofku ku guuleysto inuu gaaro tiradooda miisaan fiican. Inta lagu jiro wejigan, cuntooyinka qaar sida bariiska, baradhada ama digir.
Wajiga isugeynta Iyadoo wejigan ay had iyo jeer laga cabsado saamaynta celinta taasi waxay dhacdaa inta badan waxa loogu yeero cunnooyinka mucjisada. Inta lagu jiro wejigan, ku darista cuntooyinka qaarkood ee hodanka ku ah karbohaydraytyada. Badanaa waxay ku sii socotaa marka loo eego kiilada uu qofka laga hadlayo lumisay, gaar ahaan kiilada lumay waxaa lagu dhuftay toban waxaana lagu helayaa sidan maalmaha ay sii socoto wejigan saddexaad. Marxaladda isukeenista ma sii lumineyso miisaan laakiin way haysaa maxaa lagu gaadhay labadii waji ee hore. Waad cuni kartaa cuntooyinka horay loo mamnuucay sida khudradda, bariiska, jiiska ama rootiga.
Wajiga xasilinta: Tani waa wajigii ugu dambeeyay ee muranka dhaliyay fadlan cun iyo dhexdeeda, qofku horay ayuu u gaadhay miisaan fiican waana in la ilaaliyaa hal maalin asbuucii. Inta lagu jiro maalintaas waa inaad cuntaa oo keliya borotiin si aad u magdhabo xad-dhaafka maalmaha kale ee usbuuca. Waxaa lagugula talinayaa inaad raacdo wajigan inta lagu jiro nolosha inteeda kale oo sidan ayaa loo ilaaliyaa culeyska ugu habboon lagana fogaadaa kordhinta kilo.
Waa muhiim inaad xusuusato in cuntada si ay u noqoto mid wax ku ool ah 100%, waa inaad qaadataa in yar 12 koob oo biyo ah maalintii iyo qaaddo bur ah oat. Qaadadaani waxaa lagu qasi karaa caano fadhi ama ukumo.
Khataraha cuntada Dukan
La fadlan cun Shaki la'aan waa cunnooyinka ugu caansan maanta dad badanna waxay go'aansadeen inay raacaan. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay dad badani yiraahdaan, inta badan khubarada nafaqada ayaa isku raacsan inay tahay cunto aad u khatar badan caafimaad. Maaddaama ay tahay cunno ay ku badan yihiin borotiinada oo cunnooyin badan oo muhiim u ah jirka laga reebay, waxay u keeni kartaa dhibaatooyin daran labadaba heerka dheefshiidka iyo dheef-shiid kiimikaadka.
Marxaladaha hore ee cuntadan, isticmaalka karbohaydraytyada, Kaarbohaydrayt la'aantani waxay soo saartaa a miisaanka oo yaraada laakiin sidoo kale waxaa jira astaamo kale oo ay sababaan tamar la’aan sida daal, daal ama madax xanuun. Khataraha kale ee cuntadan ayaa ah inay u muuqdaan inay samaysmaan dhagaxyada aashitada uric taasoo sababi karta muuqaalka waxa loogu yeero dhagxaanta kilyaha. Cuntada Dukan sidoo kale waxay caan ku tahay inay keento khatar dhibaatooyinka calool fadhiga dadka qaarkiis waxaa ugu wacan maqnaanshaha fiberka cuntada lafteeda. Si looga hortago dhibaatadan, qorshahan ayaa kugu qasbaya inaad qaadato qaado oo miro dufan ah muddada cuntada la sheegay.
Sidaad aragtay, waxaa jira faa'iidooyin badan oo ah fadlan cun Laakiin sida ay tahay dhacdooyinka ugu badan ee cuntooyinka mucjisada, waxaa sidoo kale jira khataro badan oo noocan ah qorshaha miisaanka luminta. Haddii ay dhacdo inaad go'aansato inaad raacdo nooca noocan ah si aad u lumiso dhowr kiilo oo dheeri ah, waxa ugu fiican ayaa ah inaad u tagto khabiir takhasus leh oo kaala talin doona haddii ay runti mudan tahay in la raaco cuntada noocan ah. Waxaan rajeynayaa inaan ku sifeeyay shaki oo dhan ku saabsan cuntada caanka ah ee Dukan oo aad doorato dariiqa ugu wanaagsan ee suuragalka ah.
Markaas waan kaa tegayaa muuqaal sharraxaad leh si ay kuugu cadaato waxa ay ka kooban tahay cuntada Dukan iyo waxa faa iidadeeda iyo qasaaraheeda ay yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Cuntada » Cuntada Dukan
Cawaaqibka hurdada badan
Tilmaamo si aad u hesho wax yar